1270nm DFB 10mW လိပ်ပြာလေဆာရောင်ခြည် Diode ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Box Optronics
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Fiber Coupled Lasers > DFB လိပ်ပြာလေဆာရောင်ခြည် > 1270nm DFB 10mW လိပ်ပြာလေဆာ Diode
1270nm DFB 10mW Butterfly လေဆာရောင်ခြည်ကိုသံလိုက်တံဆိပ်ခတ်ထားသော 14-pin လိပ်ပြာအထုပ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ လေဆာရောင်ခြည်များတွင်အပူစွမ်းအင်အအေး (TEC)၊ အပူခံကိရိယာ၊ မော်နီတာဖိုဒီဒီဒီဒ်နှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားသောလေဆာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုရရှိစေရန် optical isolator ပါရှိသည်။ သုံးစွဲသူများအနေဖြင့်ထုတ်လုပ်နိုင်သည့်စွမ်းအားများ၊ အစုအဝေးအမျိုးအစားများနှင့် SM အမျှင်များ၊ PM အမျှင်များနှင့်အခြားအထူးအမျှင်များ၏ထွက်ရှိနိုင်သောအမျှင်များကိုအပြည့်အဝရွေးချယ်ထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လှိုင်းအလျားကိုလည်းစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် ၁၂၇၀nm မှ ၁၆၅၀nm အထိဖုံးအုပ်နိုင်သည်။
1270nm DFB 10mW Butterfly လေဆာ Diode ၏အနှစ်ချုပ်
1270nm DFB 10mW Butterfly လေဆာ Diode ၏နိဒါန်း
၃။ ထူးခြားချက်များ 1270nm DFB 10mW Butterfly လေဆာ Diode
မြင့်မားသော output ကိုပါဝါ (10 ~ 100mW);
စက်မှုလုပ်ငန်း - စံ 14PIN လိပ်ပြာအထုပ်;
built-in TEC နှင့် optical အထီးကျန်;
ITU လှိုင်းအလျား ၁၂၇၀ မှ ၁၆၅၀ nm မှရရှိနိုင်သည်။
ယုံကြည်စိတ်ချရသော: Telcordia GR-468 RoHS
4. 1270nm DFB 10mW လိပ်ပြာလေဆာ Diode ကိုအသုံးပြုခြင်း
ကို C / DWDM စနစ်များ;
လှိုင်းအလျားအလယ်ဗဟို အိုင်စီ TL = 15ï½ž35â "ƒ CW 1268 1270 1272 nm
6. Optical Pulse Waveform ၏ 1270nm DFB 10mW Butterfly လေဆာ Diode
7. 1270nm DFB 10mW လိပ်ပြာလေဆာ Diode ကိုပို့ဆောင်ခြင်း၊ သင်္ဘောတင်ခြင်းနှင့်အမှုဆောင်ခြင်း
hot Tags:: 1270nm DFB 10mW လိပ်ပြာလေဆာရောင်ခြည် Diode, ထုတ်လုပ်သူများ, ပေးသွင်းသူများ, လက်ကားရောင်းဝယ်ခြင်း, စက်ရုံ, စိတ်ကြိုက်, အမြောက်အများ, တရုတ်, တရုတ်နိုင်ငံ၌ထုတ်လုပ်သည်စျေးပေါ, အနိမ့်စျေး, အရည်အသွေး
1310nm DFB လိပ်ပြာအမျှင် Laser Diode ကိုဆက်သွယ်ပေးသည်